‘सिइओ भएपछि संगीतबाट टाढिएँ’ - कुराकानी - साप्ताहिक
८ वर्षकै उमेरदेखि सोरठी र घाटु गाउन थालेकी हुँ । ०४८ सालमा रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गरें । ०५६ मा लोक–गीतिसंग्रह ‘खुदी बजारमा’ ल्याएपछि औपचारिक रूपमा सांगीतिक क्षेत्रमा मैले पाइला राखेको हुँ ।
 गोविन्द गुरुङ, सिइओ सिभिल बैंक लिमिटेड
बैंकिङ क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?
मेरो बैकिङ करिअर हिमालयन बैंकबाट सुरु भएको हो । सन् १९९६ मा सिनियर अफिसरको रुपमा प्रवेश गरे । त्यसबाट सोही बैंकमा असिस्टेन्ट म्यानेजर, डेपुटी म्यानेजर सम्म रहेर ११ बर्ष सम्म काम गरे । त्यसपछि ग्लोबल आइएमीमा बैंकमा साढे तीन बषर्मा सिनियर म्यानेजर देखि असिस्टेन्ट जेनेरल म्यानेजर सम्म भए । ग्लोबल आइएमी छोडेर २०१२ मा सिभिल बैक आए । बैंकमा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भई ५ बर्ष काम गरे । त्यसपछि २०१७ जुलाई देखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपम कार्यरत छु ।
तपाईंलाई संगीतप्रेमी सिइओ भनिन्छ नि ?
हो, एक संगीतप्रेमी मान्छे हुँ । मलाई संगीत एकदम मन पर्छ । ८ वर्षकै उमेरदेखि सोरठी र घाटु गाउन थालेकी हुँ । २०४८ सालमा रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गरें । २०५६ मा लोक–गीतिसंग्रह ‘खुदी बजारमा’ ल्याएपछि औपचारिक रूपमा सांगीतिक क्षेत्रमा मैले पाइला राखेको हुँ । २०६४ सालमा आधुनिक गीतिसंग्रह ‘परिचय’ श्रोतामाझ ल्याएँ । पछि २०७१ सालमा ‘पल एल्बम’ निकालें । त्यसमा ९ मध्ये ६ गीतमा आफैंले संगीत भरेको छु ।
सिइओ र संगीतको तालमेलचाहिँ कसरी मिल्छ ?
पेसाले म बैंकर हुँ । गीत–संगीत मेरा रहरका कुरा हुन् । मेरो प्राथमिकता बैंकमा हुन्छ । फुर्सदमा भने म संगीतमा रमाउँछु । संगीत मेरो पेसा नभए पनि यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छु । सिइओ भएपछि भने अहिले संगीतबाट केही टाढिएको छु ।
मन पर्ने गायक–गायिका ?
म प्राय: पुराना गायक–गायिका मन पराउँछु । अरुणा लामा, नारायण गोपाल, दीप श्रेष्ठ मलाई मन पर्ने गायक हुन् ।
अफिसमा कति समय बिताउनुहुन्छ ?
सिइओको अफिस बस्ने समय कुनै निश्चित नै हुँदैन ।
घुमफिरमा कत्तिको रुचि राख्नुहुन्छ ?
घुम्नैका लागि भनेर चाहिँ अहिलेसम्म निस्कने गरेको छैन, तर कामको सन्दर्भमा घुमिरहेको हुन्छु ।
फिटनेसका लागि के गर्नुहुन्छ ?
फिटनेसका लागि फुटसल जान्छु ।
फुर्सदको समयमा के गर्नुहुन्छ ?
फुर्सदको समयमा स्पोर्ट हेर्छु । अरूको विचार सुन्छु ।
ड्रेसअप कस्तो मन मन पर्छ ?
ड्रेसअपमा मेरो कुनै च्वाइस छैन । जे लगाउँदा सजिलो हुन्छ, त्यही लगाउँछु । अफिसमा शुक्रबार र आइतबार ड्रेस कोर्ड गरिएको छ । शुक्रबार क्याजुअल ड्रेसमा अफिस पुग्छु । परम्परागत पहिरनलाई पनि हामीले अफिसमा प्राथमिकता दिने गरेका छौं । त्यसकारण आइतबार अफिसमा दौरा–सुरुवाल अनिवार्य गरिएको छ ।
पुस्तक पढ्ने खासै फुर्सद हुँदैन । पढ्न पाए साहित्यका कृति, जीवनी पढ्छु ।
चलचित्र कत्ति हेर्नुहुन्छ ?
चलचित्र हेर्न हलमा जाने फुर्सद खासै हुँदैन् । युट्युबमै हेर्ने गर्छु । सबै प्रकारका चलचित्र हेर्छु । नेपाली चलचित्रहरूमा भने कबड्डी कबड्डी, झोले, पशुपतिप्रसाद मन परेका चलचित्र हुन् ।
कुन ब्रान्डको घडी लगाउनुभएको छ ?
अहिले टिसोटको घडी लगाएको छु ।
खानपान शैली कस्तो छ ?
सामान्य खाना मन पराउँछु । विशेष गरी ढिँडो खान रुचाउँछु । इन्डियन खाना पनि खाने गर्छु । सी फुड भने कहिल्यै खान्नँ ।
अहिलेका चलचित्रमा सन्देश भेटिँदैन
शिक्षामा पनि भेदभाव कायमै छ मंसिर ४, २०७६
लेख्नभन्दा सोच्न बढी समय चाहिन्छ मंसिर ३, २०७६
अहिलेका चलचित्रमा सन्देश भेटिँदैन मंसिर ३, २०७६
मञ्चमा आफैंलाई बिर्सिएँ कार्तिक २७, २०७६
कृति बाहिर गएको छैन कार्तिक १७, २०७६
दीपकराजलाई ग्रुप टिकाउने चुनौती कार्तिक १५, २०७६
हिसाब–किताब गरेको छैन आश्विन २०, २०७६
ग्ल्यामरको अर्थ अंग प्रदर्शन होइन आश्विन ९, २०७६